China BPA Free Collapsible Water Container (misy Spigot) sy mpamatsy | Kaiguan
Paompy / Faucet
Cubitainer kilasy LDPE sakafo
Kaontenera azo ahetsiketsika BPA maimaim-poana (miaraka amin'ny Spigot)
TASTE LOHA HEVITRA TSY MISY LOHATRA:
L Plastika LDPE vita amin'ny akora lafika Japoney avo lenta indrindra.
L Tsy misy poizina ny tontolo iainana tia namana
L Tsy misy BPA PVC na DEHP
L Tsy misy fofona PVC plastika
L Tsy hisy fiantraikany eo amin'ny tsiro ny rano
Safidy fahaiza-manao isan-karazany: 5L 10L 20L.
Fampiasana eny ivelany, vonjy maika ary isan'andro:
Ny fitoeran-drano azo zahana, mety amin'ny hetsika any ivelany, toy ny kitapom-batsy, lasy, fitsangantsanganana, fiakarana, fihazana, dia afaka manampy anao hitahiry ny rano ilain'ny fianakavianao haingana sy azo antoka mandritra ny loza voajanahary na loza voajanahary toy ny rivo-doza, tadio, horohoron-tany , afo, tondra-drano na haintany. Tsara ihany koa ho an'ny fampiasana isan'andro, toy ny fiara mpamonjy voina fiara sy tobin'ny fanasana tanana amin'ny hetsika sy fety. Mitondra rano be dia be mora.
Spigot tsy misy rano: famolavolana faucet tsy manam-paharoa, spigot mora na maty / misoroka, fisorohana ny fivoahan'ny rano, tsy misy fikorontanan'ny rano miparitaka hatraiza hatraiza, afaka mifehy haingana ny fikorianan'ny rano ianao, mora ampiasaina.
L Famolavolana azo ahodina, azo entina, maivana, mora vidy sy azo averina azo ampiasaina.
L Mijanona malefaka sy malefaka na dia mangatsiaka aza nefa mitazona endrika.
L Mora nofenoina, maina, esorina ary ampiasaina indray.
L Ny tantana malefaka vita amin'ny endriny malefaka dia mahatonga ny fitazonana sy fitaterana ho mora.
L Aforeto mba ho voavonjy sy maivana ho voatazona ao anaty kitaponao na ao anaty fiaranao.
Ny kitapo fitehirizana rano dia tena ilaina amin'ny fiainana isan'andro sy ny toe-javatra maika. Raha mijanona tampoka ny fotodrafitrasa rano ao an-tanànanao, ahoana no hisotroanao na hanadiovanao azy?
Raha misy rivo-doza, tadio, tondra-drano, afo, haintany, horohoron-tany, inona no hampiasanao hitahiry rano hamaly ny filanao rano?
Ny fitoeran-drano fitehirizan-drano azo ahodina dia hanome anao fiomanana maika maika amin'ny fitaovanao mamonjy aina!
Ny kaonteneranay miaraka amina tantanana dia fitaovana LDPE avo lenta, tsy misy BPA, polyethylene misy sakafo ary fitoeran-tsolika azo ampiasaina tsy misy poizina.
Ny kitapo rano azo aforitra dia kitapo fitehirizana rano, maivana, mora entina, mateza, azo ampiasaina indray, mety amin'ny toerana rehetra, mora apetraka sy ampiasaina.
Fiderana an'ny mpanjifa
Previous: Kitapo che cheseur 20 litatra ao anaty boaty
Manaraka: Cubitainer kilasy LDPE sakafo
Cubitain Bika Cubitainer
Kitapo Cubitainer ao anaty boaty ho an'ny Adblue